မူလတန်းပြဆရာမကို ရည်းစားစကားလိုက်ပြောစဉ် လက်မခံသဖြင့် ကောင်လေးမှ ရွှေနားကပ်တစ်ရံနဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတို့အား… See more. .. – Messi Club
မူလတန်းပြဆရာမကို ရည်းစားစကားလိုက်ပြောစဉ် လက်မခံသဖြင့် ကောင်လေးမှ ရွှေနားကပ်တစ်ရံနဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတို့အား… See more. ..
မူလတန်းပြဆရာမကို ရည်းစားစကားလိုက်ပြောစဉ် လက်မခံသဖြင့် ကောင်လေးမှ ရွှေနားကပ်တစ်ရံနဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတို့အား… See more
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်နေ ဦး×××× (၅ ၃)နှ စ်သည် နံနက် ၉ နာရီက နေအိမ်၌ရှိနေစဉ် တောင်ရွာကျေးရွာရှိ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်းသို့ စာသင်ရန် ခြေလျင်လျှောက်ကာ ကျောင်းသွားသည့် သမီးဖြစ်သူ မ×××× (၂၇)နှစ် (မူလတန်းပြ ဆရာမ)သည်မွန်းတည့်(၁၂)နာရီအထိ ကျောင်းသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိကြောင်း ကျောင်းအုပ် ဆရာမကြီးမှ အ ကြောင်းကြားသဖြင့် လိုက်လံရှာဖွေရာ အချွိန်ပြင်ကျေးရွာအနီး ကားလမ်းမဘေးရှိ ချောက်ထဲ၌ မ×××× အား ဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိသောကြောင့် အရေးယူပေးရန် တိုင်တန်းချက်အရ လေးတောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်စုံစမ်းခဲ့သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအား ဖ မ်းဆီးရမိရေးအတွက် စုံစမ်းနေစဉ် မသင်္ကာတရားခံ မာန်အောင်မြို့နယ်၊ နတ်ပြင်ကျေးရွာနေ ရွှေထူး (ခ) အေးချမ်း (၂၁)နှစ်အား စစ်ဆေးရာ ၎င်းသည် မ×××× ကို ရည်းစားစကား (၃)ကြိမ်ခန့် လိုက်လံပြောဆိုခဲ့သော်လည်း
လက်မခံခဲ့ကြောင်း၊ အခင်းဖြစ်နေ့တွင်လည်း မ ×××× ကျောင်းသို့သွားသည့် လမ်းဖြစ်သော စေရင်းကျေးရွာနှင့် (၂) ဖာလုံခန့်အကွာ ဓနိတောမှ စောင့်နေစဉ် မ×××× တစ်ဦးတည်း လ မ်းလျှောက်လာသည်ကို တွေ့ရှိသဖြင့် ရည်းစားစကား ထပ်မံပြောဆိုခဲ့ရာ
မ×××× မှ လက်မခံဘဲ ပါးတစ်ချက်ပြန်ရိုက်ခဲ့၍ စိတ်ဆိုးပြီး မ×××× ၏ မျက်နှာအား လက်သီးဖြင့် ထိုးခဲ့ကြောင်း၊ မ×××× မှာ လမ်းဘေးရှိ ချောက်ထဲသို့ ပြုတ်ကျသွားစဉ် ရွှေထူး (ခ) အေးချမ်းက အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး လည်ပင်းကိုလက်ဖြင့် ညှ စ်သတ်ကာ မ×××× ၏ ရွှေနားကပ်တစ်ရံ၊
လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတို့အား ယူဆောင်ခဲ့ကြော င်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့၍ သက်သေခံပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းကာ ရွှေထူး (ခ) အေးချမ်းအား အမှုဖြင့်ဖမ်းဆီး၍ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀ ၂/၃ ၉၄/၃၇၆ အရ ပြောင်းလဲစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မူလတနျးပွဆရာမကို ရညျးစားစကားလိုကျပွောစဉျ လကျမခံသဖွငျ့ ကောငျလေးမှ ရှနေားကပျတဈရံနဲ့ လကျကိုငျဖုနျးတဈလုံးတို့အား… See more
ရခိုငပွှညနွယွ၊ ရမွးဗှဲမှို့နယနွေ ဦး×××× (၅၃)နှဈသညွ နံနကွ ၉ နာရီက နအေိမွ၌ရှိနစဉွေ တောငရွှာကှေးရှာရှိ အခှခေံပညာ မူလတနွးကှောငွးသို့ စာသငရွနွ ခှလငွှလှေောကကွာ ကှောငွးသှားသညွ့ သမီးဖှဈသူ မ×××× (၂၇)နှဈ (မူလတနွးပှ ဆရာမ)သညွ
မှနွးတညွ့(၁၂)နာရီအထိ ကှောငွးသို့ ရောကရွှိလာခှငွးမရှိကှောငွး ကှောငွးအုပွ ဆရာမကှီးမှ အကှောငွးကှားသဖှငွ့ လိုကလွံရှာဖှရော အခှိနပွှငကွှေးရှာအနီး ကားလမွးမဘေးရှိ ခှောကထွဲ၌ မ×××× အား ဒဏရွာမှားဖှငွ့ သဆေုံးနသညကွေို တှရှေိ့သောကှောငွ့ အရေးယူပေးရနွ တိုငတွနွးခကွှအရ လေးတောငနွယမွှရေဲစခနွးမှ အမှုဖှငွ့စုံစမွးခဲ့သညွ။
ရဲတပဖွှဲ့ဝငမွှားက ပှဈမှုကှူးလှနသွူအား ဖမွးဆီးရမိရေးအတှကွ စုံစမွးနစဉွေ မသငကြွာတ ရားခံ မာနအွောငမွှို့နယွ၊ နတပွှငကွှေးရှာနေ ရှထေူး (ခ) အေးခမွှး (၂၁)နှဈအား စဈဆေးရာ ၎င်းငျးငြးငွးသညွ မ×××× ကို ရညွးစားစကား (၃)ကှိမခွနွ့ လိုကလွံပှောဆိုခဲ့သွောလညွး
လကျမခံခဲ့ကွောငျး၊ အခငျးဖွဈနတှေ့ငျ မ×××× ကျောင်းသို့သွားသည့် လမ်းဖြစ်သော စေရင်းကျေးရွာနှင့် (၂) ဖာလုံခန့်အကွာ ဓနိတောမှစောင့်နေစဉ် မ×××× တစ်ဦးတည်း လမ်းလျှောက်လာသည်ကို တွေ့ရှိသဖြင့် ရည်းစားစကား ထပ်မံပြောဆိုခဲ့ရာ
မ×××× မှ လက်မခံဘဲ ပါးတစ်ချက်ပြန်ရိုက်ခဲ့၍ စိတ်ဆိုးပြီး မ×××× ၏ မျက်နှာအား လက်သီးဖြင့် ထိုးခဲ့ကြောင်း၊ မ×××× မှာ လမ်းဘေးရှိ ချောက်ထဲသို့ ပြုတ်ကျသွားစဉ် ရွှေထူး (ခ) အေးချမ်းက အဓမ္မပြုကျင့်ပြီး လည်ပင်းကိုလက်ဖြင့် ညှ စ်သ တ်ကာ မ×××× ၏ ရွှေနားကပ်တစ်ရံ၊
လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးတို့အား ယူဆောင်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့၍ သက်သေခံပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းကာ ရွှေထူး (ခ) အေးချမ်းအား အမှုဖြင့်ဖမ်းဆီး၍ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀ ၂/၃ ၉၄/၃၇၆ အရ ပြောင်းလဲစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။